Gen. Cadde ?Musharaxiinta ayaa talo ku leh keenista guddiga khilaafaadka ee doorashada? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Qardho, December 1, 2013 – Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi (Cadde) ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee Puntland iyo weliba dagaaladii dhowaan ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaas oo dad badan ku dhinteen.
Gen. Cadde oo waraysi khaas ah siiyey daljir waxaa uu si aad u dhaleeceeyey dagaalkaas, isagoo ku baaqay in xaalada la qaboojiyo isla markaasna arrinta Taleex laga daayo siyaasadda qalafsan ee is diidan.
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Cadde oo jooga Qardho, waxaa uu ka hadlay arrinta doorashada, isagoo si qoto-dheer ugu dheeraaday guddiga xalinta khilaafaadka iyo xuslista baarlamanka iyo habka loo keenayo oo aan weli la isku fahmin.
Waxaa uu sheegay in murashaxiintu ay awood u leeyihiin inay iyagu soo xushaan guddiga khilaafaadka iyagoo maraya hab la isku raacay, sida dhacday 2008 wakhtigaas oo uu Gen. Cadde Muuse madaxweyne ka ahaa Puntland.
?Musharaxiintu waa ii yimaadeen wakhtigii doorashada 2008, xataa Cabdiraxmaan waa ku jiray waxay igala hadleen guddiga iyo habka loo soo xulayo, waan u sheegay waxaan iri keensada waxaad rabtaan idinku.? Ayuu yiri Gen. Cade oo la hadlay radio Daljir
?annaga iyo murashaxiinta waan is-kaashanay doorashadii hore, waxaan go?aaminay in gobol la arkaba qof laga soo magcaabo, markay ku heshiiyeen waan saxiixay. Aniga hal qof ma keenin.? Ayuu yiri Gen. Cadde oo dhaliilay habka haatan loo keenayo guddiga soo xulida baarlamanka iyo Khilaafaadka ee xilligan.
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Cade ayaa sidoo kale ka hadlay kulan uu la qaatay inta badan safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya iyo safiirka Maraykanka kaas 2okii ?bishii hore ka dhacay Garoowe, waxaa uu sheegay inay ka wada hadleen in aan doorashada dib loo dhigin xataa hal maalin, arrintaas oo muhiim u ah xasiloonida gobolka, sida uu hadalka u dhigay.
Gen. Cadde ugu dambayntii waxaa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan shirkii isimada ee Qardho ee boqorku iclaamiyey, shirkaas ayuu ku tilmaamay mid lagu doonayey in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda, balse arrintaas aysan hir-gelin, waxaa uu madaxweyne Faroole ugu baaqay in doorashada ay si xor ah u dhacdo.
Dhegeyso: Madaxweynihii hore Gen. Cadde oo u waramaya Kooshin oo daljir ka tirsan